Norway: Ra’iisal Wasaare Erna Solberg oo mar kale dib loo doortay – Kasmo Newspaper
Norway: Ra’iisal Wasaare Erna Solberg oo mar kale dib loo doortay
Updated - September 12, 2017 11:39 am GMT
London (Kasmo), Ra’iisal Wasaaraha xilka ka sii degaya, Erna Solberg iyo xisbigeeda Muxaafidka ah oo kaashanaya xisbiyada “Progress Party” ee midigta fog, “Christian Democrats” iyo “Liberals” ayaa ku guulaystay doorashooyinkii Isniintii, 11kii September.
Dadweyne gaaraya 5 malyuun ayaa codadkooda ka dhiibtay sidii ay u xulan lahaayeen 169ka xildhibaan ee “Stortinget”, Barlamaanka 1ka aqal ka kooban ee dalka.
Isbahaysiga Solberg ayaa la sheegay in ay heleen 89 kursi oo ka mid ah aqlabiyaddii Barlamaanka, taas oo suuragalinaysa markii u horreysay oo Ra’iisal Wasaare Muxaafid ah ku guulaysto 2 jeer oo xiriir ah.
Tartanka sannadkaan wuxuu Solberg oo 56 jir ah kala dhexeeyay Jonas Gahr Store, Hoggaamiyaha Labourka, kuwaas oo wali iska ilaalinayay xisbiga “Progress Party” oo ah xisbigii uu ka qornaa Anders Behring Breivik, dilaagii 77ka qof ku laayay Utoya iyo Oslo, sannadkii 2011kii.
Qodobbadii muhiimka ahaa ee ololaha doorashada waxaa ugu weynaa, sida middii Fransa, Midowga Yurub, iyo cabsida laga qabay guusha xisbiyada shisheeye-nacaybka “Xenophobe” ee xagjirka midigta fog. Arrimaha kale waxaa ka mid ahaa dib u habaynta dhaqaalaha Boqortooyadaas oo khayraad saliid ah leh, tixgalinta isu dheellitirka deeqaha Daryeelka “Welfare” iyo gabowga dadweynaha.
Dood gaar ah waxay ka taagnayd xaaladda soo-galootiga: xogta Machadka Tirakoobka dalka waxaa la qiyaasayaa in 1dii Jenaayo 2017kii Norway ku noolyihiin 724,987 soo-galooti ah oo u dhigmaya 13,8%, Iyo 158,764 muwaadiniin ay dhaleen waalidiin shisheeye ah, kuwaas oo 3% ka noqonaya tirada guud ee dadweynaha dalkaas.
Doorashooyinkii hore ee 2013kii waxaa guuldarro taariikhi ah kala kulmay xisbiga Labourka oo taladii ay kala wareegeen Isbahaysiga Erna Solberg, waxayna ayahd markii u horreysay oo Xisbiga xagjirka fog “Progress Party” uu ka soo qaybgalo xukuumadda.